Samachar Batika || News from Nepal » एकै ट्यावलेट पनि नखाई कोरोना जितियो
एकै ट्यावलेट पनि नखाई कोरोना जितियो
पोखरा/बागलुङ, – विश्वभर दैनिक हजारौं नागरिकको ज्यान लिईरहेको ‘कोरोना भाईरस’बाट आफु पनि सं’क्रमित भएको थाहा पाउँदा अंशु सापकोटा, १९ र मनकुमारी पौडेल, ६५, को सुरुमा त होस हवास नै उड्यो । किनकी विश्वभर दैनिक हजारौं नागरिकको यही रोगले ज्यान लिईरहँदा सापकोटा र पौडेलले आफु पनि संक्रमित भएको थाहा पाउँदा आत्तिनु स्वभाविक पनि थियो ।
तर, उच्च मनोवल बनाएका दुवैजना सकुशल घर फिर्न पाएका छन् । त्यसमा पनि १५ वर्षदेखि दमको समस्या भोगिरहेकी पौडेललाई निको हुँदा त झनै सबैतिर खुसीयाली छाएको छ । किनकी विश्भरमै दम, उच्च रक्तचाप जस्ता दीर्घरोगी कोरोनाबाट बढी शि’कार भएको विवरण बाहिरिएका छन । दमकी दीर्घरोगी पौडेललाई पछि त उच्च रक्तचाप पनि देखिएको थियो । तर, त्यसले पनि कोरोनालाई पराजित गरेको छ । दुबैजना बिरामीले कोरोनाका लागि भनेर कुनैपनि औषधि सेवन गर्नु नपरेको चिकित्सकले बताएका छन् ।
सापकोटा र पौडेल मात्र नभई नेपालका अरु पनि कोरोना सं’क्रमित उपचारपछि सहजै घर फर्किन सकेका छन् । बागलुङका यी दुई महिला निको भएसँगै गण्डकी प्रदेश कोरोका बिरामीबाट हालका लागि मुक्त पनि भएको छ । कोरोनाका लागि भनेर औषधिको एउटा ट्यावलेट समेत नखाई अस्पतालबाट बाहिरिँदा उनीहहरुको मनोवल झनै बढेको थियो ।
बागलुङमा भेटिएका यी दुई बिरामी गत चैत ४ गते कतार एयरवेजको एउटै जहाजबाट नेपाल आएका थिए । बेल्जियमबाट नेपाल आएका उनीहरुलाई परीक्षणको क्रममा कोरोना सं’क्रमण पुष्टि भएको थियो । एकै जहाजमा आएका बागलुङका चारमध्ये सापकोटा र पौडेल मात्र सं’क्रमित भएका थिए ।
मनकुमारी १५ वर्षदेखि दमको समस्याबाट पी’डित छन् । उनमा पछि उच्च रक्तचापको समस्या पनि थपियो । केरोना पुष्टि भएर अस्पताल ल्याएपछि दमसंगै उच्च रक्तचापको पनि औषधी सेवन गर्न थालेकी थिइ्रन । अंशु भने अस्पताल भर्ना भएदेखि एक ट्यावलेट औषधी समेत नखाई कोरोना निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किन सकिन् ।
बागलुङ नगरपालिका—४ कुँडुलेकी सापकोटा सुरुमा सं’क्रमण पुष्टि भयो । उनको ट्राभल हिस्ट्रि खोज्ने क्रममा गौंडाकोटकी पौडेलमा पनि सं’क्रमण पुष्टी भयो । त्यसपछि दुवैजनालाई बागलुङको धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना गरियो । उनीहरु दुवैजना बेल्जियम घुम्न र आफन्त भेट्न गएका थिए । बुबाआमा र भाईबहिनी उतै भएकाले पुस तेस्रो पहिलो साता अंशु बेल्जियम गएकी थिईन् । मनकुमारी पनि आफन्त भेट्न फागुन दोस्रो साता बेल्जियम पुगेकी हुन् । तर एकैपटक घर फिरेका उनीहरुमा सं’क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
शुक्रबार राती अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर निस्कदै गर्दा उनको अनुहारमा खुसीको चमक देखिन्थ्यो । बन्द कोठाभित्रको अत्यासलाग्दो २८ दिनको बसाई सकेर उनी घर फर्कदै थिईन् । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर रेडक्रसको एम्बुलेन्स चढ्नुअघि उनले भनिन, ‘सबैको हौसला र आत्मविश्वासले गर्दा म निको भए ।’ यति कुरा व्यक्त गर्दै गर्दा उनको मुहारमा खुशी छल्किएको देखिन्थ्यो ।
अंशुका पिता ऋषिराम २००२ देखि युरोपमा थिए । १५ वर्ष इटलीमा बसेपछि उनी बेल्जीयम गएका हुन् । अंशु नेपालमै जन्मिईन् । ईटली गएपछि अर्की छोरीको जन्म भयो र बेल्जियम सरेपछि छोरो जन्मेका छन् । अंशु बेल्जियम गएपछि ऋषिराम नेपाल आएका थिए । चैत २८ गते उनको फर्किने टिकट थियो तर लकडाउनले उनी फर्कन पाएका छैनन् । त्यती मात्रै होईन छोरीमा कोरोना सं’क्रमण पुष्टी भएपछि यो एक महिना उनको त’नावपूर्ण रह्यो । ‘सुरुमा त निकै गाह्रो भयो, पछि कोरोना पनि निको हुन्छ भन्ने भएपछि आफन्त र छिमेकीले पनि ढाडस दिन थाले, ’उनले भने,‘आज छोरी निको भएर घरमा लिएर जाँदैछु । निकै खुसी छु ।’
‘दमको रोगीलाई कोरोनाले गाह्रो बनाउँछ भन्ने टिभीमा सुनेको थिएँ, मलाई त केही न भएन बाबु,’उनले अनुभव सुनाईन । आत्मविश्वास बलियो बनाए रोगसँग ल’ड्न सकिने रहेछ भन्ने उनलाई लागेको छ । ‘मलाई त निको हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास थियो,’ पौडेलले भनिन्,‘आफन्त र डाक्टरले पनि हौसला दिए । म ठिक भएँ । एउटै धोको छ, यो कोरोना म’हामारीका बीचमा म’र्न नपरोस् ।’
कोरोना विरुद्ध कुनैपनि औषधी तयार नभएकाले विरामीको हौसला नै मुख्य हतियार हुने धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र बी.पोख्रेल बताउँछन् । ‘कोरोनाको सं’क्रमण पुष्टी भएपछि जे खालको स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ त्यही औषधी दिने हो,’ उनले भने, ‘यो भाईरसको औषधी छैन । बिरामीमा आत्मवल र प्रतिरोधात्मक शक्ति बलियो भयो भने निको हुन्छ ।’ मनकुमारीलाई उच्च रक्तचाप थपिने बाहेक स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नथपिएको पोख्रेलले बताए । ‘दम त उहाँको पुरानै समस्या रहेछ, उच्च रक्तचाप बाहेक अरु समस्या भएन । तर, अशुं भने औषधी नै खान नपरी घर फर्किन सकिन,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशमा पहिलो बिरामी बनेकी सापकोटालाई सुरुमा थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजानेबारे सल्लाह भएको पनि थियो । त्यस्तै पौडेललाई रातारात पोखरा ल्याउनेबारे योजना पनि बनेको थियो । किनकी पौडेलमा पहिल्यै दमको रोग थियो । कोरोना सं’क्रमितलाई दमले थप अ’प्ठेरो पार्ने भएकोले भेन्टिलेटर चाहिने अनुमान गरेर पोखरा ल्याउनेबारे योजना बनेको चिकित्सक बताउँछन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति समेत रहेका वरिष्ठ फिजिसियन डा. बुद्धिबहादुर थापा भन्छन्, ‘सापकोटालाई काठमाडौं र पौडेललाई पोखरा नै ल्याउने योजना पनि बनेको हो । तर, पछि बागलुङ उपचार गरेर हेरौ भन्ने निर्णय भयो ।’
सन्तोष पोखरेल/संगम घर्तीमगर(नागरीक)
प्रकाशित मिति १४ बैशाख २०७७, आईतवार ०४:४७